Kodzero-dzevanhu, 05 Gunyana 2017
Chipiri 5 Gunyana 2017
Mukuru anoona nezvekutoreswa kwezvitupa, VaTobaiwa Mudede, vanoti nzvimbo dziri kutorerwa nevanhu zvitupa pasi pechirongwa ichi ndidzo nzvimbo dzavagara vachishandisa pose panoitwa chirongwa ichi saka hapana chinoshamisa.
Mutongo weDare Wotarisirwa neChishanu paNyaya yaVaMatemadanda
VaMatemadanda vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, mudzimai wavo Amai Grace Mugabe, pamwe nekuda kukonzera kusagadzikana munyika.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amai Rita Makarau vanoti vanotarisira kuti panopera gore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Izvi zviri kuitwa sezvo nyika iri kutarisira sarudzo gore rinouta.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica Zvopinda muMusangano weChristian Fellowship International
Mubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey, America sangano re Christian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitirwa kuNorth Carolina gore rinouya.
Chirongwa cheKutoresa Vanhu Zvitupa, Magwaro eKuzvarwa, Chinoparurwa muNyika Yose
Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose kwemwedzi mitatu, apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitoresa vanhu magwaro aya.